Bandhigga lebiska Afrikaanka ee London - BBC Somali
Bandhigga lebiska Afrikaanka ee London
Image caption Bandhigga quruxda dharka Afrika
Naqshadeeyayaasha caanka ah ayaa waxa ay soosaaraan kusoo bandhigaya, Faashiyonka sanadka Afrika ee magalada London ee isbuucan.
Bandhigga quruxda dharka ee caalamka, ayaa fikrad ahaan waxa ay tahay muuqaalka quruxda mid lagu soo bandhigayo masrax ahaan, iyadoo la muujinayo dharka iyo alaabaha kale ee Qaaradda.
Marxaladahan oo kale ayaa ah bandhigga isbuuca quruxda ee Afrika, oo sanad kastaa lagu qabto magaalada London, haddana waa markii afaraad oo laqabto.
Image caption Qaar ka mid ah dumarka muujiya quruxda dharka
Image caption Gabdhaha dharka xayeysiiya
Image caption Ragga dharka xayeysiiya
"Afrika waa meel soo baxday hadda," ayey tiri Josette Matomby, oo u dhalatay dalka Congo ahna qabanqaabiyaha munaasabadda iyo naqshadeeye dharka oo xarun u ah bariga magaalada London, waxayna kamid tahay kuwa billaabay bandhigga.
Waxa ay soo magacqaaday shirka Holland laga leeyahay oo lagu magacaabo Vlisco, taas oo maamusha qeybaha qaaradda gaar ahaan suuqyada dharka casriga, oo haddan saambalo geyneysa bandhigga.
Waxaa jirto cabsi ah in naqshadeeyayaasha Afrika inaysan si wanaagsan uga faa’ideysan caannimada shaqadooda taas oo qeyb ka ah waxyaabaha lagu lab kicinayo xafladaha sanadlaha ah ee qurba joogta Afrika ay u billaabeen.
Image caption Waa gabaha Afrika lagu sameeyo
Image caption Waxyaabaha dhaqanka Afrika
"Anaga xittaa waa inaan soo saarnaa dhar tayo fiican leh. Waxaan ka doonaayaan Afrikaankla inay muuqaal ahaantooda is maalgashadaan.